QODOBBADA WAXTARKA EE CHARD, FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELADA CALEEMAHA CALEEN - SOOSAARKA DALAGGA
Sidee chard waxtar leh, isticmaalka guryaha sifeeya ee chard
Chard (magaca caadiga ah - dabocase caleen) waa khudradda cagaaran ka badan cagaarka, laakiin waqti isku mid ah, marka laga reebo xididdo caadiga ah, waxaan cuno qaybta dhulka, oo aan xididada, taas oo ah mid aan ku habboonayn cuntada. Kala saaraan petiole iyo dabocase caleen.
Foomka caleenta wuxuu yeelan karaa midab kala duwan: cagaaran, lacag, jaalle, casaan, guduud, raspberry iyo xittaa cadaan. Waxay cunaan ma aha oo kaliya chardheer chees ee chard, laakiin sidoo kale caleemaha casiir leh oo casiir leh.
Ma taqaanaa? Xitaa awowayaasheen waxay cuneen caleemaha iyo caleemaha caleemaha caleen. Roomanka qadiimka ah waxay ahaayeen kuwa ugu horreeya ee qiimeeya tayada dhadhanka sare iyo sifooyinka wanaagsan ee chard, kaas oo u bixiyey magaca "Kaabashka Roomaanka".
Geedka caleenta waxaa lagu beeray oo keliya caleemaha isku midka ah isbinaajka. Ka dib jarida, dhirta si dhakhso ah ayey u koraan caleemo cusub, taas oo u ogolaaneysa xilli in ay hesho waxoogaa soo goostay.
Chard: qaabka kiimikada ee xididdada caleen
Ka feker, 93% ee chard ayaa ka samaysan biyo, halka 7% oo keliya miisaanka guud ee warshadu ay u tagtay saamiga adag.
Laakiin xitaa qadarkaan yar ee uugu soo baxay wuxuu noqonayaa mid ku filan si uu u siiyo waxyaabo gaar ah oo bogsoon leh.
Xeryaha dabiiciga ah ee laga helo beetroot waxaa ka muuqda borotiinno, dufan iyo carbohydrates oo ku jira dhirta oo lagu qiyaaso 1.8; 0.2 iyo 2,1 miligram. Intaa waxaa dheer, caleemaha qani ku ah ash, fiyuusta cuntada, acids fatty, polyphenols, mono - iyo disaccharides.
Waa muhiim! Markaad isticmaaleysid qolka, waa inaad u fiirsataa dhexdhexaadinta. Xayawaanka wax lagu qoro waxaa ku jira xaddi badan oo fitamiin K ah, isticmaalka xad-dhaafka ah ee keena dheecaan dhiig, kaas oo keeni kara abuurista xinjir dhiig oo keena kororka weerarada dhanjafka.
Mangold wuxuu leeyahay kalooriyada maadada: 100 garaam oo badeecada ka kooban 19 kcal oo keliya, taas oo u dhiganta alaabada ugu fiican ee cunnooyinka cuntada. Isticmaalka maalin kasta ee chard ma aha oo kaliya in lagu caawiyo inuu lumiyo pounds dheeraad ah, laakiin sidoo kale wuxuu si weyn u wanaajiyaa caafimaadka.
Ma taqaanaa? Qiimaha gaarka ah waa dhismaha nitrogenous ee ku jira caleemaha chard, betain, taas oo kor u qaadaysa burburinta iyo isugeynta wanaagsan ee geedaha iyo xayawaanka xayawaanka. Sidoo kale waa qalab dhisme oo loogu talagalay sameynta walxaha lipotropic-physiologically active - rajin, taasoo kicinaysa shaqada unugyada beerka waxayna ka hortagtaa horumarinta isbedelada atherosclerotic ee xididdada dhiigga. Intaa waxaa dheer, rajeyntu waxay xakameysaa horumarinta unugyada malignantiga ah.
Caleemaha xaashida marka la eego qaabka fitamiin-macdanta - raadin dhab ah. Chard waxay leedahay qiime nafaqo oo sarreeya, laakiin kalooriye yar. Waxay ka kooban tahay qaddar aad u fiican oo ah unugyada yaryar iyo macro, sida potassium, fosfooraska, sodium, magnesium, birta, zinc iyo calcium.
Intaa waxaa dheer, caleemaha waxaa ku jira fitamiin B, iyo sidoo kale beta-carotene, ascorbic acid, niacin, phylloquinone, selenium, copper iyo manganese.
Guryaha waxtarka leh ee chard
Guryaha bogsiinaya caleenta caleen ayaa lagu faahfaahiyay si faahfaahin ah bogsiiyeyaal hore. Chard caned ah ayaa kula taliyay in aad timahaaga ku tirtirto qandhada, iyo kobcinta timaha kobaca xoqidkeeda si ay u dalbadaan meelaha xayawaanka. Intaa waxaa dheer, casiir ah ee warshadda waxaa lagula talinayaa in ay u isticmaalaan kuwa ku xanuunsan caloosha joogtada ah, maadaama ay si fiican u kiciyo caloosha.
Qaadashada maalinlaha ee caleenta caleen waxay keeni doontaa faa'iidooyin badan oo jidhka ah, waxayna kaa caawineysaa yareynta sonkorta, cadaadiska dhiigga ee dhiig-karka, hagaajinta qalabka wadnaha iyo xididdada dhiigga, habka difaaca jidhka iyo difaaca jirka, kiciya beerka iyo kelyaha. Walxaha ku jira caleemaha dhirta waxaa ku jira waxyeelo aad u daran iyo kuwa dib u soo kabanaya, taasoo keenaysa inay si firfircoon u isticmaasho warshad khaas ah oo ku taal kozmetoloji.
Isticmaalidda xididada caleen
Iyada oo ay sabab u tahay kartida daaweynta sare iyo sifooyinka sare ee dhadhanka, chard waxay ka heshay codsigeeda ballaaran ee cosmetology, daawada dhaqanka iyo karinta. Laga soo bilaabo xididdo caleenta u samee maraqakuwaas oo loo isticmaalo daaweynta boogaha, gubashada iyo barafka.
Gruel of caleemo ayaa lagu daboolay indhaha si loo yareeyo infakshanka xinjirta, taas oo ay ugu wacan tahay maaddada dhuxusha iyo lutein - waxyaabaha ka hortagga horumarka cataracts iyo xumaanshaha macquulka ah. Juice cusub - Daawo wax ku ool ah ee ilkaha, burooyinka, dhibcaha da'da iyo lafaha.
Ma taqaanaa? Dhakhaatiirta waayeelka ah ayaa badanaa isticmaala chard oo qayb ka ah cuntooyinka kala duwan ee daawooyinka. Tusaale ahaan, Hippocrates waxay rumaysnayd in warshadani ay ka caawiso in laga takhaluso qandhada iyo cudurrada maqaarka, Paracelsus wuxuu u adeegsaday in lagu daaweeyo cudurrada dhiigga iyo dhiigbaxa kor u kaca.
Cunto karinta, caleemaha iyo xayawaanka ee chard waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo saladh, duubka kaabajka, maraq beetroot iyo vinaigrettes. Talyaaniga, cuntooyin badan oo caaryar ah ayaa laga kariyaa caleenta caleen. Faransiiska ayaa sheeganaya in cawska chard dhadhanka sida digirta asparagus, iyo caleemo - isbinaajka. Nafaqadayaasha waxay kugula talinayaan cunista salad caleenta, sida xitaa kaydinta gaaban waxay keeneysaa hoos u dhac ku yimaada hantidooda faa'iidada leh.
Ugu fudud, laakiin waqti isku mid ah, saxan macaan ee caleenta caleen ayaa la tixgeliyaa saladh ee chard iyo basasha cagaaran. Wixii diyaarinta waa lagama maarmaan in la jarjaro caleemaha chard iyo basasha cagaaran oo ka buuxi labeen dhanaan.
Iyadoo taxaddar leh, warshad waa in loo adeegsadaa kuwa ku xanuunsanaya cudurrada nidaamka dheef-shiidka, maadaama ay ku jiraan tiro badan oo ah walxaha waxyeellada leh.
Cunto qaadashada xad dhaafka ah ee casiirkeedu wuxuu waxyeeleyn karaa jirka, tan iyo xadgudubka chard wuxuu keeni karaa xanuunka dyspeptic, lulmo-darrada iyo garaaca wadnaha.
Sida loo isticmaalo chard ee daawada dhaqanka
Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, mangold waxaa loo isticmaalay daawada dhaqameed, faa'iidooyinkeeda jirka waa ka badan yahay cad, laakiin isticmaalka aan xakameyn ayaa sidoo kale laga yaabaa inay waxyeello u tahay caafimaadka. Caleemaha Fresh ee xididdo caleen - daaweyn aad u fiican ee dhanjafka. Decoction ah ee caleemaha iyo petioles ee chard waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurada habka neefsashada iyo tonsillitis.
Dhirta casiirka ayaa muddo dheer joojiyay dhiigbaxa. Marka hore, nabarka ayaa si adag loo xiiray, ka dibna waxaa lagu shubay maraq cusub oo ah xididdo caleen ah. Warshad waxaa ku jira xaddi aad u fiican oo bir ah, potassium, fosfooraska, calcium, sidaa darteed decoction ee waxay noqon doontaa mid faa'iido leh anemia, yaraanta fitamiin, daaweynta lafaha lafaha iyo burooyinka.
Chard sidoo kale waxaa badanaa la isticmaalaa marka ay lagama maarmaan tahay in laga takhaluso hurdo la'aan, neurasthenia, ama saa'id ah oo ka baxsan nidaamka dareenka.
Waa muhiim! Sababtoo ah xaqiiqda ah in chard ay ka kooban tahay qadar xoog leh oo ah oxalic acid, taas oo u egtahay in ay ka soo baxdo, isticmaalka waa ka wanaagsan in ay diidaan kuwa ku xanuunsan cudurrada kelyaha iyo caleen kaadiheysta.
Chard ayaa si farxad leh u muujin doonta dhammaan waxyaabaha muhiimka ah, waxaad u baahan tahay inaad ogaato oo keliya cuntooyinka saxda ah ee diyaarinta daawooyinka daweynta. Caleenta xaashida waxaa loo isticmaali karaa sida anti-bararka, maqaarka iyo bogsashada dhaawaca.
Ujeeddooyinkan, u dalbo decoction ee caleemaha geedka. Si aad u diyaargarowdo, waxaad u baahan tahay inaad ku shubato laba qaado oo caleemo caleemo la jajabiyey oo leh laba koob oo biyo ah karkariyo, karkari 10 daqiiqo biyo nadiif ah iyo isticmaal sida cadaadis ama cabitaan.
Si kastaba ha noqotee, xaaladaha intooda badan, daaweynta chard ayaa hoos u dhacda si ay u cunaan dhirta iyaga oo qayb ka ah saladh ama cabitaan cusub oo casiir ah.
Beetroot la kariyey
Marka la karinayo, chard waxaa loo isticmaalaa diyaarinta saladhka. Dhaqdhaqaaqa raaxada iyo qiimaha nafaqada sare ee dhirtu waxay keeneen caan ku ah cibaadada. Inta badan ee suxuunta dabocase caleen ay fududahay in la diyaariyo.
Cun caleemaha yar yar iyo petioles geedka. Waxyaalaha calorie yar ayaa kuu ogolaanaya inaad isticmaasho chard oo sal u ah diyaarinta cuntooyin badan oo cunto ah. Halkaan waxaa ah cuntooyinka qaarkood ee cuntooyinka digaaga delicious, cunto karinta oo aan waqti badan qaadan.
Waxaad u baahan tahay inaad qaadato 500 garaam oo caleemo yar oo caleenta caleen ah, ku walaaq galaas biyo ah oo daadi caarayn. Si caleemaha ku dar laba khudradood oo cusub oo la jarjarey, laba ukun oo adag oo la kariyey, basasha cagaaran, dill iyo dhir.
Isku qas dhammaan walxaha iyo xilliga leh laba qaado oo labeen dhanaan, ku dar miloco caleen ah oo la kariyey iyo 750 garaam oo kvass rooti ah.
Caws xiirto ah oo caws ah.
Petioles kala go'ay saxanka caleenka iyo isku kari ilaa 2-3 daqiiqadood dab aad u hooseeya. Iska tuur tuumbada oo ha iska daayo biyaha, ka dibna qallaji oo shiishaa saliidee kasta. Ku darso labeen dhanaan.
Isticmaalka chard ee ujeedooyinka qurxinta
Mangold waa dhir iyo mid caafimaad leh. Caleemooyinkeeda waxaa sidoo kale loo isticmaalaa kiknoolojiyada, waxay si fiican u quudiyaan, qoyaan, nadiifiyaan, dibna u soo kabtaan maqaarka. Intaa waxaa dheer, xididdo caleen ayaa ah qaybta ugu weyn ee barnaamijyada daryeelka timaha badan. Waxay kicisaa kobcintooda, xoojisaa xididada, ka sokow, waxay ka dhigeysaa inay iftiimiso oo ay yareyso qulqulka.
Hoos waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah cuntooyinka qurxinta ee ugu caansan adoo isticmaalaya chard.
Maaskaro wajiga ah.
Caleemaha si aad ah loo dhaqay waa in la daboolaa biyo karkaraya, qaboojiye yar, ku rid wejiga nadiifka ah, daboolo dhawr lakab oo faashad ah oo ka baxsan 20 daqiiqo. Kadib markaad ka saartid maaskarada, waxaad isticmaashaa kareem kasta oo nafaqo leh.
Caleemaha la jajabiyey ee warshadda waa in lagu daadiyaa qadar yar oo biyo ah karkaraya, ku dar shaaha oo ah malab iyo dhawr dhibcood oo liin ah, ku rid caleemaha u dhexeeya lakabyada faashadda oo codso wejiga. Ka ilaali maaskulku inuu ka yaryahay 15 illaa 20 daqiiqo, ka dibna wejigaaga biyo diirran oo diirran oo ku riix barta barafka.
Maskaxda si aad u kiciso koritaanka timaha.
Goynta madaxa 30 daqiiqo ka hor inta aanad ku dhaqin juice ciirta cusub ee la jarjaray ayaa timaha ka dhigi doonta mid caafimaad leh oo caafimaad leh.
Contraindications in isticmaalka chard (lafaha caleen)
Mangold, inkastoo dhammaan suuqyada waxtarka leh iyo qiimaha nafaqada ee sareeya, ay leeyihiin qaar ka soo horjeeda, taas oo sababaysa isticmaalka si loola dhaqmo taxadar kuwa u nugul gallstone ama urolithiasis, maadaama maadada korodhka ah ee oxalic acid ay sababi karto sii xumeynta cudurka.
Intaa waxaa dheer, iyada oo taxadar leh in cunista xididada caleenta waa in ay ahaadaan kuwa qaba xanuunka trombophlebitis, varicose damacyada ama xinjirta dhiigga oo kordhay. Beta-carotene ku jira caleemaha dhirta, waxay kor u qaadeysaa fayaqabka dhiigga, taas oo keeni karta saameyn aan loo baahnayn.
Sidoo kale, daryeelka waa in loo qaataa isticmaalka chard for kuwa u nugul horumarinta xasaasiyadaha xasaasiyadda ama qabatimaan sharafjirnimadiisa shakhsi ahaaneed.
Mangold waa warshad caan ah, caleemaha taas oo ku taala awoodda bogsashada awoodda leh.
Haddii aad rabto in aad ilaaliso caafimaadka, dhalinyarada iyo quruxda wakhti dheer, ka dibna wax ma qaban kartid adiga oo aan cunin xayawaanka caleenta.